Sisungule umkhankaso wentengiso kuFacebook ukukhuthaza uhambo oluya simahla. Oku kukhokelele kumawakawaka okuthandwa, izabelo, ii-tweets kunye namakhonkco angama-50 angenayo kwiibhloko zehambo. Ukuthuthwa kwetrafikhi yendalo kuphuculwe ngama-35% kwisithuba seenyanga ezimbalwa kuba izabelo zentlalo kunye nokunxibelelana okungaphakathi zizinto eziphambili ezikwindawo yeGoogle algorithm. U-Amine Rahal, umseki kunye ne-CEO yeLittle Dragon Media
Ngokomndilili, sibonile ukuphakama okungama-10 ukuya kuma-20% kwitrafikhi yokukhangela ye-organic yamagama aphambili kunye namabinzana apho kubekwa khona iintengiso, ngakumbi kwindawo yokukhangela enophawu. Ezi ntengiso ziyafikeleleka kakhulu kwaye zisebenza kakuhle, njengoko zihlala zixabiso eliphantsi. UKent Lewis, umsunguli kunye noMongameli we-Anvil
Ngokucacileyo, umthengi wakhe wayeqala kwisiseko esincinci sewebhu kunye nengeniso yeselfowuni. Kwaye, kukho ezinye ezimbini ezibaluleke kakhulu. Inye: Utyalomali unyaka opheleleyo kukusebenza kweinjini yokukhangela. Kukuzinikezela kunye nokuzama- kunye nembono yexesha elide- ongasoloko uyibona. Kwaye ezimbini: i-mileage yakho ingahluka. Kungenxa yokuba umthengisi omnye ujonge inyanga kwaye ubetha iinkwenkwezi oko akuthethi ukuba wonke umthengisi uza kufumana iziphumo ezifanayo.
Kwaye, ubuncinci, iziphumo zeGarrison zingqina isidingo semanyano phakathi kweendlela zentengiso. Abathengisi abangafuniyo nokuxhaphaza intsebenziswano phakathi kweendlela zentengiso ezihlawulelweyo kunye nezinto eziphilayo bayaphoswa yigolide esulungekileyo.
tags: UAlison Garrisonallison ikampuimbumbuluuhambo lwamalahleUKent Lewislaura simisurhweboamajelo entengisoomnichannelImithombo yeendaba eziphilayouphando lwezinto eziphilayoeziphilayo eziphilayoabeendabaImidiya ehlawulwayoukukhangela okuhlawulelweyoPPCivolus